Slim Tri-laab laab kiis ah Warshadda looxa | Shiinaha Slim Tri-laab laaban kiiska for Tablet-saareyaasha, shirkado
Iswaafajinta Kiiskani wuxuu la jaan qaadayaa iPad Pro 11 2021 3rd Generation, iyo labadaba iPad pro 11 jiilka 2aad 2020, ipad pro 11 2018. iPad pro 11 jiilka 2aad 2020 Model: A2228, A2068, A2230, A2231 iPad pro 11 2018 Model: A2013, A1934, A1980, A1979 Waxyaabaha soosaarka: Qalabka lagu dhejiyo Qalin qalinka Kuxiran qalin qalin kala duwan iyo qalinka Apple qalinka 1aad / 2aad iyo qalabka. Qalabka qalinka lagu dhejiyay wuxuu siiyaa meel aamin ah oo wax ku ool ah oo lagu keydiyo qalinkaaga. Taageer tufaaxaaga tufaaxa ...
Wixii Samsung galaxy tab A7 lite 8.7 inch 2021 Funda Tablet Case Magnetic Slim Folio Leather Cover
Iswaafajin Dhammaystiran Kiiskani wuxuu la jaan qaadayaa Samsung Galaxy Tab A7 8.7 ”(2021) Qaabka looxa ee loo yaqaan SM-T220 / T225. Helitaanka dhammaan astaamaha iyo kontaroolada tab A7 Lite 8.7. UMA shaqeyn doono 2020 Version Tab A 8.4 ama aalad kale oo lagu daydo. Slim & Lightweight Super khafiif ah iyo naqshad dhabarka adag oo khafiif ah waxay ku dareysaa tiro aad u yar halka ay ku siineyso Galaxy Tab A7 Lite 8.7 difaac weyn. Trifold stand Kiiska A7 Lite wuxuu ku siinayaa boos istaag ku habboon oo aad ku daawan karto filimada ama wax qorista ...
Kiis Magnetic Xoog leh Wixii iPad Air 4 10.9 inji ah 2020 Kiiska Ultra Slim Cover
Waxaa loogu talagalay iPad Air 4aad Generation 10.9 Inch 2020 (Nambarka Model: A2072 / A2316 / A2324 / A2325). Aan ku habboonayn aalado kale. SLEEK ONE-PIECE Design & MAGNETICALLY LIFACHED magnets xoog leh oo ku dhex jira ayaa hubinaya in quful adag ka dhexeeyo kiiska & iPad. Daboolka birlabta magnetic wuxuu si adag isugu dhejiyaa iPad-ka wuxuuna hubiyaa inuu sugan yahay, ka ilaali iPad-kaaga xoqida iyo dhaawaca maalin kasta. 2 MUUQAALKA JOOGTADA MAGNETIKA Naqshadeynta naqshadeynta magnetic buuxda waxay ka kooban tahay shaqo istaag saddex geesood ah, oo keenaysa y ...
Slim stand folio case for ipad mini 6 kiiska maqaarka casriga ah ee ipad mini 2021 cusub
Slim case case for ipad loogu talagalay Samsung galaxy tab A7 T500 T505 for Lenovo tab M10 for Huawei Matepad
KIISKA IYO LIGHTWEIGHT CASE Kiiska PC-ga ee khafiifka ah iyo miisaanka culus wuxuu ku darayaa waxoogaa yar inta aad kiniinigaaga ka ilaalinayso. QALABKA IILAALINTA LA HELI KARO oo tayo sare leh PU maqaar iyo microfiber gudaha gudaha ah oo jilicsan oo aan lahayn xoqan, kiiska PC-ga adag ayaa kiniinkaaga ka ilaaliya kuuskuusyada yaryar, naxdinta iyo xoqitaanka. BILAASH GACANTAADA 3-laab laab daboolka hore oo leh labo boos oo daawasho iyo teeb ku qancineyso baahiyahaaga kala duwan. Aragtida xagalku waxay gacmahaaga u siisaa waxqabadyo kale waxayna iska ilaalisaa wax xanuun wadajirka ah, halka ...
Soft TPU Back kiiska loogu talagalay ipad 10.2 8th 7th jiilka Samsung galaxy tab S6 lite
SHELL BADBAADO BADAN Soft TPU daboolka dambe wuxuu ka ilaaliyaa kaniinigaada nabarrada iyo fin yar. Dahaarka microfiber jilicsan ee maqaarka PU ee maqaarka ayaa ka hortagaya kaniinigaaga inuu xoqo. QAABILAHA QALABKA QALINKA KU DHISAN Geliyaha qalin-qabadka ah iyo afyare adabtarada ayaa ku dhejiya qalinkaaga. Markasta oo aad rabto, si fudud ugu qaad qalinkaaga qalabkaaga. Weligaa ha ka welwelin inaad lumiso qalinkaaga, u isticmaal mar kasta iyo meel kasta oo aad rabto. QAADASHADA QAADASHADA Dhammaan astaamaha kiniiniga waa la heli karaa xitaa haddii kiisku ku jiro. Hurdo JOOJI ...